बाढी- विविधा - कान्तिपुर समाचार
श्रावण ४, २०७६ विमल निभा
कमरेड माधवकुमार नेपालको घर डुबानमा परेको खबर सुनेर मलाई बडो दुःख लाग्यो । योभन्दा बढी म अरु के गर्न सक्छु ? त्यसैले आफ्नो दुःख प्रकट गर्न म उनीकहाँ जानै लागेको थिएँ, एक्कासी रोकिएँ । यसको कारण के हो भने यो चलन पुरानो भइसक्यो । अब ता दुःखको साटो सुख पो प्रकट गर्ने गरिन्छ क्यारे !
जे होस्, म कमरेड माधवकहाँ यसका लागि अर्थात् सुख प्रकट गर्न कहिल्यै गएको छैन । यस्तोमा म जस्तोलाई दुःख प्रकट गर्ने के अधिकार छ ? यही सोचेर म उनीकहाँ नगएको हुँ । तर यो एकदमसँग प्रकट हुन खोजिरहेको मेरो दुःखको के गरुँ म ? यसको दुई उपाय हुनसक्छ ।
एक, यसलाई बेसरी थिचथाच पारेर प्रकट गर्ने झन्झटैबाट मुक्त हुन सकिन्छ । तर यो मलाई त्यति व्यावहारिक लागिरहेको छैन । र अर्को उपायके भने मैले एकैचोटी माधव कमरेडकहाँ नगएर उनकै गुटकोकुनै कमरेडकोमा दुःख प्रकट गर्न किन नजाने ? यही दोस्रोसोचबाट नै राम्ररी काम चल्ने भएकोले म आफ्नो दुःखसहित घरबाट निस्किएँ ।
यसका लागि मैले धेरै परसम्म हिँंड्नु परेन । किनभने मेरो टोलमा एक माधव गुटका कमरेडको घर रहेको छ । (पेट्रोल पम्पनेर) । त्यहाँ पुगेर मैले कलबेल थिचेंँ । एक अपरिचित अनुहारले ढोका खोल्यो । र उसले मलाई अपरिचयको भावले सरसर्ती हेर्‍यो । मैले पनि सोही प्रकारले उसलाई हेरेँं । त्यसपछि पनि हाम्रो अपरिचय कायम नै रहेकोले मैले भनेंँ, ‘यो कमरेडको घर हो ?’
‘कुन कमरेड ?’ उसले उल्टै मसँग नै प्रश्न गर्‍यो ।
‘कमरेड फलानाको घर
होइन यो ?’
‘होइन, यो त कमरेड ढिस्कानाको घर हो ।’
यो कस्तो संयोग पर्‍यो भने कमरेड फलानाजस्तै कमरेड ढिस्काना पनि माधव गुटकै कमरेड हुन् । कुनै विजातीय कमरेड होइनन् । मेरो भन्नुको मतलव के हो भने उनी ओली गुट अथवा प्रचण्ड गुट अथवा झलनाथ गुट अथवा वामदेव गुट अथवा नारायणकाजी गुटका नभएर खासा माधव गुटका कमरेड हुन् । अझ कमरेड ढिस्कानालाई माधव गुटमा कमरेड फलानाभन्दा उच्च स्तरको गुटीय कमरेड मानिने गरिन्छ । त्यसकारण मैले कमरेड ढिस्कानालाई नै भेटेर आफ्नो दुःख प्रकट गर्ने निधो गरेँं । अँ, कमरेड ढिस्कानाको घर पनि यही टोलमा रहेको थाहा थिएन, अबथाहा भयो ।
कमरेड ढिस्कानाको घरमा निकै चहलपहल थियो । केही महिला र बच्चाहरू यताउता गरिरहेका थिए । एक प्रकारको रमाइलो वातावरण थियो । (यस्तै लाग्यो) । केही बेरपछि के थाहा पाएँ भने आज कमरेड ढिस्कानाको जन्मदिन हो । धत्तेरिका ! म त विलकुलै गलत समयमाआफ्नो दुःख प्रकट गर्न आइपुगेको रहेछु । त्यसैले फर्कन के लागेको थिएँ, कमरेड ढिस्काना देखापरे ।
‘आउनोस्, आउनोस् ।’ उनले अघि बढेर भने, ‘कहाँ जान लाग्नुभएको ?’
‘माफ गर्नोस्, मलाई कमरेडको जन्मदिन भनेर थाहा थिएन ।’ मैले विस्तारै भनेंँ, ‘म त दुःख प्रकट गर्न आएको हुँ कमरेड ।’
‘कस्तो दुःख ?’ उनी एकाएक सतर्क भए ।
‘मैले आज बिहानै कमरेड माधवको घर डुबानमा परेको सुनेंँ ।’ मैले दुःखपूर्ण अनुहार बनाएर कमरेड ढिस्कानाको अनुहारमा हेरेँं ।
‘कुन घर ?’ उनी पनि मेरो अनुहारमा हेरिरहेका थिए ।
‘माधव कमरेडको गौरमा रहेको घर डुबानमा परेको होइन कमरेड ?’
‘ए, तराईको घर, त्यो घर डुबेर के भयो ?’ उनी मुस्कुराए, ‘यहाँका घरहरूलाई त केही भएको छैन नि ।’
‘कहाँका घर कमरेड ?’
‘नयाँबानेश्वरको घर, कालिमाटीको घर, महाराजगन्जको घर, कमलादीको घर, भैंसेपाटीको घर, बसुन्धराको घर, जोरपाटीको घर, बूढानीलकण्ठको घर, कलंकीको घर, थानकोटको घर, त्रिपुरेश्वरको घर, नयाँसडकको घर, बौद्धको घर, जावलाखेलको घर, चावहिलको घर, पुतलीसडकको घर, कपनको घर, दरबारमार्गको घर ।’
‘कमरेड माधवका घरहरू ?’ मेरो स्वरमा आश्चर्य थियो ।
‘होइन, मेरो घर । (हाँसेर) तर छाड्नोस् घर–सरको कुरा ।’ उनले मेरो हात समातेर भने, ‘आज मेरो जन्मदिन हो ।’
यसपछिको कुरो के हो भने मैले जन्मदिनको उपलक्ष्यमा माधव गुटका कमरेड ढिस्कानालाई ‘ह्याप्पी वर्थ डे टु यु’ भन्नुपर्‍यो । यसको बलमा उनले मलाई बैठक कोठामा लगेर केकको एक ठूलो टुक्रा खुवाए । (यति नै) । अब यसलाई म आफ्नो शौभाग्य भनुँ अथवा दुर्भाग्य, म गएको थिएँ, कमरेड माधवकुमार नेपालको घर डुबानमा परेकोदुःख प्रकट गर्न, तर स्वादिष्टकेक खाएर ‘ह्याप्पी वर्थ डे’ भनी आफ्नो घर फर्किएँ ।
प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०८:४६
श्रावण ४, २०७६ रमेश के.सी.
रामचन्द्रन ती स्नायु वैज्ञानिकहरूमा पर्छन्, जसलाई अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका जीव वैज्ञानिक रिचर्ड डकिन्सले स्नायु विज्ञानका मार्कोपोलो भनेका थिए ।
चारैतिर हड्डीहरूको बीचको एक पाउ मासु रहेको यो मस्तिष्क विज्ञानकोआविष्कार गर्न बाँकी रहेको अन्तिम सिमाना बताइएको छ । एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशक आइपुग्दा मस्तिष्कबारे धेरै नै अध्ययन भएको छ । यसले निकट भविष्यमा मानव चेतनाको उत्पत्तिबारे पनि आविष्कार गर्ने छ । यदि मानव चेतनाको उत्पत्तिको रहस्य थाहा लाग्यो भने ज्ञान/विज्ञानको क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति हुनेछ । अहिलेसम्म हामीलाई रहस्य र अज्ञात लागेका प्रश्नहरूको उत्तर भेटिनेछ ।
मानसिक रोगको सजिलैनिदान हुनेछ । आखिर यो चेतनाले मानव जीवनको आदि र अन्त्यको कथा बोकेकोछ । यही चेतनाका कारण समाजमा बुद्ध भगवान् भए, हिटलर राक्षस भए । अहिलेसम्मको अनुसन्धानअनुसार मस्तिष्क एक कपोकल्पित अवधारणा बनेको छ । विचारलाई नै हामीले मस्तिष्क भन्दैगएका छौं । तर ब्रेन अर्बौं न्युरोन्सहरूको संयोजन हो । न्युरोट्रान्समिटरहरूको रसायनहरूको खेल हो ।
१७ औं शताब्दीका फ्रान्सेली दार्शनिक रेने डेकार्ट पीनएल ग्लान्ड आत्मा हो भन्थे । तर त्यो सही सावित भएन । उनको प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘म सोच्छु त्यसैले म छु ।’ दर्शनशास्त्रको क्षेत्रमा अत्यन्त धेरै उद्धृत गरिएको यस उक्तिले अहिले पनि स्नायु वैज्ञानिकहरूलाई चकित तुल्याएको छ । ‘म’ भन्ने नै भ्रम हो भन्ने निर्णयमा स्नायु विज्ञान पुगेको छ ।
प्रायःजसो सिजोफ्रेनियाका बिरामीहरूको ‘म’ विखण्डित भएको हुन्छ । उनीहरू विभ्रम र मनको विशृंखलताबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् । आफ्नो स्व भन्ने हराएपछि उनीहरू डिपर्सनालाइजेसनमा पुगेका हुन्छन् । यो जटिल रोगको उपचारका लागि स्नायु विज्ञानले नयाँ आविष्कार गर्न लागेको छ ।
अटिजम, डिप्रेसन, अल्जाइमर्स, बाइपोलर र क्षारे रोगको निदानका उपाय पनि पत्ता लाग्नेछ । मनोविकार विज्ञानको समस्यालाई स्नायु विज्ञानले समाधान गर्ने छ । यसै क्रममा न्युरल टेक्नोलोजीको अवधारणा आएको छ । यो प्रविधि विकास भएमा मस्तिष्कको संसारमा अद्भुत क्रान्ति आउने छ ।
‘दि फ्युचर अफ दि माइन्ड’ का लेखक मिचियो काकु भन्छन्– भविष्यको साम्राज्य मस्तिष्कको साम्राज्य हो । मस्तिष्कलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेपछि यसको क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । यसले अचम्मको काम गर्नेछ । मानव मस्तिष्कको विषयमा प्राचीनकाल देखिनै चिन्तन हुँदै आएको हो । आध्यात्मिकहरूले ध्यानस्थ मस्तिष्कको आविष्कार गरेका थिए ।
अब स्नायु विज्ञानले यसको नयाँ आयामबारे उजागर गर्नेछ । सन् १९४० मा बेलायती दार्शनिक गिल्बर्ट रायलले ‘दि कन्सेप्ट अफ माइन्ड’ लेखी यसको अध्ययनलाई लोकप्रिय बनाएका थिए । मस्तिष्क ब्रेन नै हो । ब्रेनले जे गर्छ त्यो नै मस्तिष्क हो भन्ने दार्शनिकहरू पनि छन् । यसको अध्ययनमा द्वैतवादी र पदार्थवादीहरू छन् । द्वैतवादीहरू धर्मको नजिक हुन्छन् भने पदार्थवादीहरू विज्ञानको नजिक हुन्छन् ।
पदार्थवादी स्नायु वैज्ञानिक डेनियल डेनेट हुन् । उनी चेतनाको उत्पत्तिको आविष्कार गर्न लागेका छन् । सन् ६० को दशकमा सबै कुरा संस्कृतिमा खोजिन्थ्यो । त्यतिखेर सांस्कृतिक अध्ययन फस्टाएको थियो । अहिले हिंसा, प्रेम, आवेग, यौन, दया, माया र सिर्जना सबै मस्तिष्कमा खोजिन्छ । मानव जीवनको अध्ययनमा यसले पद्धतिगत परिवर्तन ल्याएको छ । प्रमात्रा भौतिकी जस्तो विज्ञान पनि अहिले यसको अध्ययनमा लागेको छ ।
रोजर पेनरोज जस्ता गणितज्ञ मस्तिष्कमा चेतनाको उत्पत्ति अणुहरूको अन्तर्क्रियाबाट हुने बताउँछन् । मस्तिष्कको क्षमता बढाउने औषधिहरू उपलब्ध हुन थालेको छ । अहिले व्यापक रूपमा प्रयोग हुन थालेको कृत्रिम बुद्धिको आधार एल्गोरिदम पनि मस्तिष्कको क्षमतामा नै छ । मस्तिष्क बूढो उमेरसम्म प्लास्टिक जस्तो तन्किने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । न्युरो प्लास्टिसिटी भनिएको यस स्वभावले विभिन्न मानसिक घात र रोग भएका मानिसलाई निको हुन मद्दत गर्छ ।
यो तन्किने स्वभावले मस्तिष्क परिवर्तन भइरहन्छ र आफ्नो पुरानो स्वास्थ्य रूपमा फर्कन खोज्छ । सांस्कृतिक रूपमा भारतीय, नेपाली, अमेरिकी, अरबी र अफ्रिकी मस्तिष्कहरू पनि सक्रिय हुन्छन् । यसर्थ मस्तिष्क स्नायुदेखि संस्कृतिसम्म जोडिएको छ । यसै प्रसङ्गमा अहिले ईश्वरको अस्तित्व पनि मस्तिष्कमै खोज्न थालिएको छ । न्युरोन्सको अध्ययनबाट ईश्वरको खोजी हुन सकिने तथ्य आएको छ । मस्तिष्कका बाह्य र आन्तरिक रूपहरू हुन्छन् । बाह्य रूपमा यसको सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभाव हुन्छन् भने भित्री रूपमा स्नायु र रसायनका कार्य हुन्छन् ।
बीसौं शताब्दीको प्रारम्भसम्म मस्तिष्कलाई बर्जित विषय मानिन्थ्यो । मनोवैज्ञानिक सिग्मन्ड फ्रायडले मनको अध्ययनबाट नयाँ दर्शन पत्ता लगाएपछि मस्तिष्कलाई गम्भीर रूपमा लिन थालियो । सन् ९० को दशकबाट प्रविधिको विकाससँगै एमआरआई र ईसीटीको आविष्कारले क्रान्ति ल्यायो । अहिले हामी रङ्गीन मस्तिष्क चलिरहेको अवस्थामा कम्प्युटरमा हेर्न सक्छौं । मस्तिष्क कम्प्युटर प्रविधिसँग जोडिने छ । माइन्ड नेटको उत्पत्ति हुनेछ ।
सपनाहरूलाई भिडियो टेपमा राख्न सकिने छ । सुदूर भविष्यमा शरीरबाट चेतनालाई निकालेर अन्तरिक्षमा पठाउन सकिने छ । भाषा र सौन्दर्य कसरी उत्पन्न हुन्छ त्यो पत्ता लाग्नेछ र कृत्रिम रूपमा मस्तिष्क बनाउन सकिनेछ । स्पेस विज्ञान जस्तै अत्यन्त जटिल मानिएको यो क्षेत्र बिस्तारै सार्वजनिक रूपमा प्रयोग र उपभोगको साधन बन्नेछ । अहिले प्रभावशाली रहेको कम्प्युटर विज्ञान, इन्टरनेट र भविष्यमा व्यापक हुने कृत्रिम बुद्धिको आधार भनेको मस्तिष्कको क्षमता र कल्पनाशीलता नै हो ।
नयाँ विज्ञानले बाह्य संसारको होइन कि आन्तरिक संसारको अध्ययन गरिरहेको छ । मानव शरीरको संरचना र बुद्धिमाथि केन्द्रित यो अध्ययनले शरीरको जैविक यन्त्रलाई अनुकरण गरिरहेको छ । अघिसम्म पदार्थको अध्ययनको युग मानिएको समय अब शरीरको युगमा प्रवेश गरेको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०८:४५